I-atelier yobugcisa, iintyatyambo kunye nobumfihlo
I-atelier-house ikufuphi neepaki, ubugcisa kunye nenkcubeko kunye neendawo zokutyela eziqhelekileyo. Yindlu enomgangatho omnye enegadi yabucala, ejikelezwe yimithi, ngaphandle kwesixeko, elalini kodwa kufutshane emaphandleni. Kuyinto 4 kuphela km ukusuka Carpi kunye emendweni, ngoko kwisikhundla socwangciso ukufikelela izixeko vutshila kumantla eItali, 20 'ukusuka kumbindi Modena., Isithuba evulekileyo, ukuba ubuhlobo kunye ukuwasa enkulu.
Ndirenta indlu yonke kwindawo eyimfihlo.
I-atelier-house yi-villa ngaphandle kwesixeko, iikhilomitha ezi-4 kude, kwilali yaseFossoli, kumda welali, ejikelezwe yimithi, enegadi kunye ne-wisteria pergolas. Ndirenta indlu yonke kwindawo enye, ngoko ke ubumfihlo lilungelo, kuba andihlali apha. Ihlanganiswe negumbi lokuhlala elikhulu eliqaqambileyo, elahlulwe isiqingatha kwikhitshi-igumbi lokuhlala, kunye netafile yetafile kunye nezihlalo eziphakamileyo, kwaye isiqingatha sisitudiyo sam sokupeyinta, kunye ne-easels kunye neetafile. Indawo yokulala ikhokelela kumagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela. Ngasemva, umnyango weglasi ukhokelela kwi-terrace enkulu evulekile, enikwe amagumbi okuhlala, itafile kunye nezihlalo zengalo, i-ambulera kunye netafile ye-buffet, emthunzini we-oki enhle ebonakala ingena kwi-terrace.
Igumbi laseTulle, elijongene nomthi omkhulu we-chestnut wehashe, lijongene nentshona kunye nefenisha yesilingi: inebhedi ye-sofa ephindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 ezitofotofo ze-armchair (ezinesiseko se-slatted), eziguqula igumbi libe ziibhedi ezi-2 ezingatshatanga. Egumbini, nangona kunjalo, kuhlale kunokwenzeka ukongeza ibhedi enye enye, kumntwana ukuya kwiminyaka eyi-12. Ukongeza kukho itafile encinci yokubhala, i-wardrobe, iitafile ezisecaleni kwebhedi kunye nezitulo ezibini.
Igumbi leMirrors, elijonge kumqolo weehornbeams, lijonge ngasempuma, linebhedi yesofa ephindwe kabini, idesika yelap top, itafile encinci, izitulo ezibini kunye nefeni elisimahla. I-wardrobes ezimbini zenziwe kumacala edesksi, kwi-shelf yeglasi, ekhuselwe ngamakhethini e-silk amhlophe anemigca eluhlaza okwesibhakabhaka, ezaliswe ngama-hangers, amashalofu kunye nezikhongozeli.
Imithetho emithathu yendlu yile: 1-akutshaywa ngaphakathi, ewe kwi-terrace okanye egadini; I-2- xa iindwendwe zingekho, nangona ixesha elifutshane, ndicela ukuba i-atelier ivalwe kwiingcango ezintathu kwaye i-shutters ithotywe, kunye nazo zonke iifestile kufuneka zivaliwe: ekusebenzeni, ndicela ubuninzi. ukhuseleko lwendlu. I-3 - xa upheka kunqatshelwe ukusebenzisa i-anyanisi, i-garlic, intlanzi kunye nezinye izivumba ezinamandla, okanye ezithosiweyo.
IFossoli yilali ekwiikhilomitha ezi-4 ukusuka kwisixeko saseCarpi; kukho bathula, ngokuba emaphandleni ezingqonge idolophu, aniweva ingxolo yangasemva sixeko, yaye oku nesidima uyakwazi ukuva emsindweni, ayisayi kusasa, kwaye unokufumana umoya uxolo nokuphumla. Kwidolophana kukho zonke iinkonzo, i-50 m: ikhemesti, ibhanki, ivenkile, iposi, i-bakery yendabuko kunye neemveliso ezigqwesileyo, kodwa kwangaxeshanye isithili asibandakanywanga kwitrafikhi ephambili, yindawo yokuhlala, emaphethelweni. ezisemaphandleni, apho ungabona i indawo enhle endalo emasimini olinywayo, izulu livulekile, i Apennines ngasemva xa kucacile kwaye ekugqibeleni kwelanga, njengomboniso ukuba ayikho kwaphela ezicaceleyo esixekweni. Kwakhona kule lali kukho iipizza, iindawo zokutyela kunye neethaveni eziqhelekileyo. Amanyathelo ambalwa ukusuka kwindlu kukho ipaki yommelwane, apho umzila wokujikeleza ozolileyo uqala, ukufikelela kwisixeko ngemizuzu elishumi, udlula ngokuzola kwamasimi. Indawo ikwanobuchule bokufikelela, ngendlela yelizwe kunye nemizuzu embalwa, ngqo ekungeneni kwindlela yemoto, kunye nokuya kwizixeko ezahlukeneyo zobugcisa, zonke zifikeleleka lula, ngaphandle kokuwela iindawo ezixakekileyo: umz. I-Modena kwi-20 ', Reggio 20', Parma 45 ', Bologna 45', Ferrara '45, Mantua 40', Verona 50'.
Andihlali apha, kodwa ukuba iindwendwe zinazo iimfuno ndiza kufumaneka.